Umahluko phakathi kokuqhekeka kwesanti kunye nokudubula
Zombini ezi nkqubo zisetyenziselwa ukucoca indawo yokusebenza kunye nokususa uthuli. Ngokwesiqhelo isetyenziswa ngaphambi kwepeyinti okanye inkqubo yokutyabeka. Isebenzisa imithombo yeendaba ebukhali, okanye isanti, kwi-chisel kude nomphezulu kufana nokuqhekeka ...
Ungawususa njani umhlwa ngeSand Blaster
Umhlwa wesanti kwimoto kuya kwenza ukuba kube lula ukubuyisela kunye nokupeyinta. Unokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zemidiya kwisanti, kuxhomekeke kwisinyithi semoto kunye nobungakanani bomphezulu. Isandblasting siyimfuneko ngaphambi kokuba uqale ukubuyisela Susa inkunkuma kwindawo enkulu yokusebenza enkulu ...
Indima kumatshini imbabala isanti kunye nomatshini shot imbabala
Izixhobo zokuqhumisa isanti zidlala indima ebalulekileyo kwinkqubo, ewe, kukho amanye amashishini amaninzi, iimveliso ezininzi zisetyenzisiwe kumatshini wokuqhumisa isanti ukuphatha. Umatshini wokwenza isanti kukusetyenziswa komoya ocinezelweyo, isanti, ukubetha ngesantya esiphezulu ngombhobho wemipu apho imveliso yomhlwa ...
Kukho izicelo ezininzi koomatshini shot imbabala. Isicelo sokuqala nesiphambili kukucoca ii-castings ukususa isanti evulekileyo kunye notshiso kunye nomlinganiso we-ferrous kunye ne-non-ferrous castings. Inkqubo yokuqhushumba iyanciphisa ubumnandi kwaye inyuse uxinzelelo ngokuma kwealuminium
icandelo ezahlukeneyo ngomatshini sandblasting
Amalungu amathathu ahlukeneyo malunga nomatshini we-sandblasting setup ahlala enamacandelo amathathu ahlukeneyo: i-abrasive ngokwayo, isiguquli somoya, kunye nomlomo we-blaster. Ukucocwa kunye nokucocwa kwento encinci, indawo yokusebenza yokubamba isiqwenga seglasi nayo iyafuneka, njengoko kuluhlobo oluthile lokuqokelela ...
Yintoni umatshini weShot blaster
Umatshini we-blot blaster sesinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu zokwenza isanti. Ewe akukho kuphela umatshini omnye wokudubula, kuba zininzi iindlela ezahlukeneyo zokwenza isanti. Umatshini we-blot blaster unamavili amane, amathandathu, asibhozo okanye nangaphezulu, kwaye unokuba nendlela yokuguqula ...
Ukuqhumisa umatshini ixabiso
Ixabiso lomatshini wokuqhumisa i-HST lelona lixabiso eliphantsi kumzi mveliso omnye. Ixabiso lomatshini weSandblasting, ndiyazi kancinci ukusuka kwixabiso elikwi-Intanethi lomatshini wokwenza isanti, nakumthengi malunga nokufowunelwa ngomnxeba kunye nomatshini othile wokuqhumisa umatshini wexabiso lomatshini ...